IPL 808nm diode laser inkqubo yokususa iinwele njenge-f2
Ukukhutshelwa ngokusisigxina kweenwele, kukho ubuchwepheshe obu-2 beklasi: IPL kunye ne-808nm diode laser. Ukukhutshwa kweenwele laser kwi-laser kuyinto efanelekileyo efanelekileyo kwi-IPL kulusu olumnyama kunye nonyango olukhulu lokususa iinwele kwindawo. Ngeli xesha i-IPL inokwenza unyango olwenziwayo kwimithambo, ukuguga kwesikhumba, i-freckles kunye ne-acne.
Inkqubo ye-diode las808 ye-808nm yenziwa ngokubanzi kwaye yenkqubo efanelekileyo yokususa iinwele ekusebenziseni kwezonyango. Ukukhetha okukhethiweyo kwefotothermolysis (SPTL), ukuthelekiswa kwesantya esithile sokukhanya kunye nobungakanani bempumlo ukufumana isiphumo esifanelekileyo kwisichumisi esijolise kwisiphumo esincinci kwisithambisi esijikelezileyo. I-Lasers inokubangela umonakalo wasekhaya ngokufudula ngokukhetha ubushushu obujolise kumnyama okujolise kuyo, i-melanin, kwindawo ebangela ukukhula kweenwele, i-follicle, ngelixa lingafudumalanga lonke ulusu. Ukufakwa kwamandla kweenwele ze-follicle melanin kunamandla kuma-XNUMXnm wavelength, onokuthi onakalise ifilimu ngendlela efanelekileyo, okwangoku akukho ndlela imbi yokuphendula ulusu.
I-IPL elifutshane kukukhanya okukhulu kwe-Intral Pulsed Light isebenzisa iteknoloji yokukhanya ecociweyo ye-Broadband ukuze ukhethe ngokukhethekileyo ubushushu obujolise kuko (ii-chromophores) esikhumbeni. Kuxhomekeke kumandla esithuba esikhethiweyo, chromophores ekujoliswe kuyo inokuba yi-melanin okanye i-hemoglobin. Ngale ndlela, i-pigmentation, i-spider veins kunye neeflicliclic zeenwele zingatshatyalaliswa ngokukhethekileyo ngaphandle kokonakalisa ulusu oluqhelekileyo olujikelezileyo.
 Ukuvuselelwa ngokubanzi (Photorejuvenation)
 Ubumdaka (amabala elanga, amabala obudala, amabala, ithoni yolusu engalinganiyo)
 Ukukhupha ama-Acne
 Imithambo yesigcawu (iTelangiectasia)
1. I-Multifunctional: I-2 laser teknoloji idibanisa kwinkqubo enye
2. Amandla aphezulu: 1200 W IPL amandla; I-600W ingenise imida ye-laser ehambisanayo, amandla apheleleyo angama-2500W
3. Inkqubo yokuphola enkulu: Inkqubo yokupholisa i-condenser eyamkelweyo iqinisekisa ukuba iiyure ezisebenzayo ezisebenza ngokuchanekileyo ziyahambelana ngqo neemfuno zonyango ezinkulu.
4. Ukuthuthuzela: 0 ~ -5℃ isafire yokunxibelelana okupholileyo
5. Kulula ukuyisebenzisa: ukubala ukurekhoda ukuboniswa kwisibambiso se-IPL kunye nescreen, iplagi kunye nokudlala isixhobo sokunxibelelana kulula ukusitshintsha.
6. Ulawulo lomntu: Iilwimi ezi-7 ukhetho; indlela yokumisela ngokuzenzekelayo ngombala wolusu, umbala weenwele, uxinano lweenwele; Ukuhamba kwamanzi kunye nobushushu bamanzi ukujonga kunye nesilumkiso, hlukana nokujonga inqanaba lamanzi
7. Ezoqoqosho: IPL iqinisekisa ukugqabhuka kwama-200,000. I-diode laser iqinisekisa ama-20,000,000 amahlumela. Uyilo oluphathekayo luqoqosho kuhambo lokuhamba.
I-808nm Diode laser
I-15 * 50mm, 8 * 40mm (ngokuzithandela)
I-AC220V / 110V±I-10%, 50-60HZ